स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार्दै “होम स्टे” – Saurahaonline.com
स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार्दै “होम स्टे”
सौराहा अनलाइन | २०७३, २८ माघ शुक्रबार
चितवन, २८ माघ । ग्रामीण होम स्टेले समुदायका व्यक्तिहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भएका अवसरलाई समेट्दै विभिन्न संघसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा गाउँमा होम स्टेहरु सञ्चालमा आएका छन् ।
यसरी सञ्चालनमा आएका होम स्टेले स्थानीय बासिन्दाको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विभिन्न जातजातिका सांस्कृतिक धरोहरलाई संरक्षण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सफल होम स्टेले पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न थालेको छ । चितवन तथा नवलपरासीमा खुलेका विभिन्न जातजातिको होम स्टेले आफ्नो संस्कृति संरक्षण गर्दै पर्यटकलाई लोभ्याउने काम गरेका छन् ।
कुनै समय कुना भनेर पछाडि पारिएको नवलपरासीको कावासोतीमा रहेको अमलटारी होम स्टे यतिबेला नेपालको नमुना होम स्टेको रुपमा स्थापित भएको छ । स्थापना भएको छोटो समयमा नै उत्कृष्ट होम स्टे बन्दै नेपाल सरकारबाट पुरस्कार समेत हात पारेको होम स्टेले स्थानीयको दैनिक जीवन यापनमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ । होम स्टे सञ्चालनमा ल्याउने अमलटारी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रेम शंकर मर्दनिया थारुले होम स्टे स्थापना भएपछि स्थानीयको दैनिक जीवन यापनमा आमूल परिवर्तन आएको बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थापित होम स्टेले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्दा त्यहाँको पर्यापर्यटनमा विकास पुगेको स्थानीय सिमन महतोको भनाइ छ । होम स्टे स्थापना भएपछि स्थानीयको अर्थोपार्जनदेखि लिएर सीपमूलक तालिम दिँदै दिगो जीवन यापन गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन भएको महतोले बताए । होम स्टे सञ्चालन भएको गाउँमा संरक्षणको क्रियाकलाप बढ्दै गएकोले नमुना गाउँ बनाउने तयारीमा गाउँलो जुटेको महतोको भनाइ छ ।
होम स्टे रहेको क्षेत्रका विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरु करिब १० वर्ष अगाडिसम्म विद्यालय नगएर माछा मार्न जाने गरेको भेटिन्थे । होम स्टे स्थापनापछि स्थानीयमा चेतनाको स्तर वृद्धि भएर बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको स्थानीय थमबहादुर मुसहर बताउँछन् । पछिल्लो समय बोटे, मुसहर समुदायका बालबालिकाहरु पनि विद्यालय पहुँचमा पुगेको मुसहरको भनाइ छ ।
स्थानीय स्तरमा रहेका सम्भावनालाई समेट्दै ग्रामीण विकासमा जुट्न सकेमा मुलुकको दिगो विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्दै स्थानीयको सहभागितामा गरिने विकास निर्माणका कामले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्नुका साथै समृद्ध नेपाल निर्माणमा समेत टेवा पुग्ने थियो ।
निर्मला पन्तलाई न्याय देऊ ! २०७८, १२ श्रावण मंगलवार
देउवा सरकारलाई शुभकामना ! २०७८, ७ श्रावण बिहीबार
मनसुनजन्य विपद्बारे सचेत बनौँ २०७८, ५ असार शनिबार
सरोकार उपभोक्ता अधिकारको २०७७, ६ चैत्र शुक्रबार
समृद्ध भरतपुर महानगरको चर्चा २०७७, १४ फाल्गुन शुक्रबार